ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် ကျောင်းဆရာဦးဖိုးစော ရေးသားတင်ဆက်တဲ့ “ပညာရေးရာ ပဒေသာ” အပတ်စဉ် ဆောင်းပါးကို အခုတပတ်ကစပြီး တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမှာ အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ…ဆရာဆရာမတွေကို အရင်အာဏာရှင်အစိုးရခေတ်က အတိုင်း အခမ်းအနားတွေမတက်မနေရ ညွှန်ကြားတာမျိုး မလုပ်သင့်တော့တဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… ပညာရေးအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မလှိုင်မြို့နယ် ထန်းတောရွာက အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီး တစ်ဦးရဲ့ အမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ…ဆရာ ဆရာမတွေကို လုပ်သက်အရ ရာထူးတိုးပေးတဲ့ စနစ်အစား တကယ်အလုပ်လုပ်သူတွေကို ဦးစားပေး ချီးမြှင့်သင့်ကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ…ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေက လက်အောက်ငယ်သားတွေကို အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံသင့်တဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ…ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေကျင်းပတဲ့အခါ လိုအပ်သလောက်ပဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီး အချိန်အကန့်အသတ် ထားသင့်တဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဌာနစည်းမျဉ်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပြီး၊ အဲဒီစည်းမျဉ်းအရ ဆရာဆရာမတိုင်း ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… သုတေသန စာအုပ်စာတမ်းတွေကို ပညာရှင်တွေအကဲဖြတ်ပြီးမှ ထုတ်ဝေတဲ့အလေ့အကျင့် ပြန်ပြီးမွေးမြူဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… တက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာရှိသင့်ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… ပညာရေးလောကမှာ ဗဟိုဦးစီးစနစ် ဖြစ်လာကတည်းက ဆရာဆရာမတွေကို နယ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… စနစ်ဟောင်းနဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဆရာတွေ စနစ်သစ်နဲ့အသားကျဖို့ အချိန်ယူကြိုးစားရမယ့်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… မိဘတွေက သားသမီးကို နာမည်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ထားတာဟာ ပညာရေးကောင်းဖို့လား၊ အာဏာရှိအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုဖို့လား ဆိုတာကို ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… ဆရာတွေက ကျောင်းသားတွေကို နိုင်ငံရေးအရ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့် ပေးသင့်သလို၊ သင်ကြားရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ… ပညာရေးကဏ္ဍမှာ သုတေသနပညာ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ “နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း’ မရောထွေးအောင် ဘယ်လိုစည်းခြားထားသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့. မြန်မာကျောင်းသားတွေ အားကစားမှာ ထူးချွန်ခဲ့ဖူးသလို၊ အဲဒီလို ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပညာတော်သင်ဆုတွေလည်း ပေးခဲ့ပုံအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့. အမေရိကန်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာ စာသင်နှစ်အစရဲ့ပထမဆုံး သတင်းပတ်က သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြောတဲ့ကာလဖြစ်သလို၊ ကျောင်းသားတွေဘယ်လောက်ကြိုးစား ရလဲဆိုတာ ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားတာကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့..ကျောင်းသားတွေကို ကာယအားကစား သင်တဲ့အခါ တတ်ကျွမ်းသူတွေကို ခန့်အပ်သင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင် အားကစားလောကမှာပါ အကျိုးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့.. ပညာရေးဌာနမှာ စာမေးပွဲစနစ်တို့၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတို့၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်တာတို့ လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားနေတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်သလို၊ တဘက်မှာလည်း ဆရာတွေကို အဆင့်မြင့် သင်တန်းတွေ ပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့...အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း (ပထမပိုင်း) ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြ ထားတာကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့...ကျောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြ ထားတာကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့...တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း နားလည်မှု ပိုမိုရရှိစေဖို့ ပညာရေးကဏ္ဍက လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်လို့ တင်ပြထားပြီး ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြားထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့... မြန်မာကလေးအတွက် ပညာရပ်တွေကို မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ သင်ပေးတာက ကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုနားလည်စေသလို၊ တိုင်းရင်းသားကလေးတွေကိုလဲ သူတို့မိခင်စကားနဲ့ သင်ပေးတာက သူတို့ကို ပညာတတ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြ ထားတာကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ... မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်မှာ ပညာရပ်တွေကို မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ သင်ပေးတာဟာ ကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုနားလည်စေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ... မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်မှာ ပညာရပ်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုသင်နေတာ ဘယ်လို အခြေအနေရောက်နေလဲ၊ မြန်မာပညာရှင် တယောက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပညာရပ်ကို ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင်တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ... မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်မှာ ပညာရပ်တွေကို ဘယ်ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ်ခေတ်မှာ မြန်မာစာနဲ့သင်ခဲ့လဲ၊ ဘာတွေ ထူးခြားခဲ့လဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးရှင် ကျောင်းဆရာ ဦးဖိုးစောကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ... ပညာရေးရာ ပဒေသာသိပ္ပံပညာရပ်တွေကို မြန်မာစာနဲ့ သင်သင့်လား၊ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ သင်သင့်လားဆိုတာကို မလေးရှားနိုင်ငံက အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတပတ်မှာ ကျူရှင်လွှမ်းနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် ကျောင်းဆရာဦးဖိုးစောကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ခုတပတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ အရေအတွက် ၆ သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ အခြေခံပညာ ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် ကျောင်းဆရာဦးဖိုးစော ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းခေါ်ချိန်စည်းကမ်း၊ အပတ်စဉ်စာမေးပွဲနဲ့ အိမ်စာကို စနစ်တကျစီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တာကို အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကစနစ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် ဆရာစော ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားတာကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလမ်းပွင့်လာတာနဲ့ အများပြည်သူအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တာ တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဆရာ/ဆရာမတွေမှာ တနှစ်ပတ်လုံးအတွက် နားရက်သတ်မှတ် ပေးထားပေမဲ့ နားခွင့်မရအောင်ဖြစ်နေရတဲ့စနစ်ကြောင့် အလုပ်မတွင်တာကို ဆောင်းပါးရှင် ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားတာကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ - ပညာရေးလောကမှာ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ဆရာ/ဆရာမတွေအတွက် အစီအစဉ်ဇယာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ သတ်မှတ်ရက်တွေမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေတဲ့စနစ်ကနေ ပညာရေးပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲပြီး စနစ်တကျလုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ဆီသွားကြဖို့ ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် ကျောင်းဆရာဦးဖိုးစော ရေးသားတင်ဆက်တဲ့ “ပညာရေးရာ ပဒေသာ” အပတ်စဉ် ဆောင်းပါးကို အခုတပတ်ကစပြီး တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမှာ အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ထားတာကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။